Minamato YeIpfungwa dzakavhiringidzwa | MINYENGETERO MARI
musha Munyengetero Minamato Yeiyo Pfungwa dzakavhiringidzika
Pfungwa dzakavhiringidzika ipfungwa dzinonetsa, pfungwa isina rugare nguva dzose asi inogara ichinetseka. Kuvhiringidzika ndeimwe yemanzwiro akaipisisa angave nemuKristu. Muhupenyu hwedu hwezuva nezuva zviitiko takatarisana nemibvunzo dzakasiyana, zvinetswa izvo dzimwe nguva kuvhiringidzika kwekuzvarwa. Nhasi tichave tichipinda muminamato yepfungwa yakavhiringidzika, nyonganiso dzose mupfungwa dzako dzichaburitswa nhasi muzita raJesu Kristu.
Samuel Chadwick mune imwe yemashoko ake anoti "Kuvhiringidzika uye kusava nesimba ndiwo mhedzisiro isingakwanisi kana huchenjeri hwenyika neyakagadziridzwa kuvepo uye nesimba reMweya waMwari"
Bhaibheri rinoti muna 1 Vakorinte 14:33 Nekuti Mwari haazi wenyonganiso, asi werugare, sapakereke dzose dzevatsvene. Kana munhu afunga kuisa Mwari asides uye otsiva Iye nechake, zvisirizvo manzwiro akaiswa mukati, ipapo munhu anotanga kuwana kugutsikana kunze kwaMwari kuronga uye chinangwa kwaari, vazhinji vechiKristu havatomboziva kuti kune zano kana chinangwa chaMwari kwavari, Zvese zvavanoda chishamiso, ivo vanoda kutaura mumwe mupfupi wakashata munamato neyakaipa mweya mukati mavo uye vanotarisira chishamiso kuti chiitike.
2 Vakorinte 2: 11, kuitira kuti satani arege kutikanganisa. Nekuti isu hatizive nezvechirongwa chake, nyonganiso inouya nekuda kwemanzwiro akaipa atinowana kunze kwaMwari shoko nemweya wake.
Chivi chinokonzerawo nyonganiso, zvivi zvinouya sekukonzerwa nekuchiva uye manzwiro atinonzwa kunze kwaMwari, patinotadza satani ane mukana wekutinyonganisa, pakutanga anotoyedza kutinyengerera kuti titadze nekutinyonganisa dzimwe nguva tinokanganisa izwi raMwari. mupfungwa medu sezvaakaita paakange achiidza Muponesi wedu Jesu.
Patinogashira kurwadziswa, kana isu tiri mune imwe mhando yemuyedzo, kana iwe uchitadza, kana uchinge uchinetsekana nechimwe chivi, idzi inguva apo satani achamhanyira mukati akataura zvinhu senge hauna kukodzera kuna Mwari, Mwari anopenga. pauri, hausati uri muKristu chaiye, Mwari akakusiya, usaende kuna Mwari woramba uchikumbira ruregerero, imhosva yaMwari kumupa mhosva, nezvimwe.
Satan anouya opinda manyepo aya, but yeuka satan anonyepa. Achaita chero chaanogona kuti akuite kuti usave nechokwadi nerudo rwaMwari kwauri, ngoni Dzake, Nyasha Dzake, uye Simba Rake. Mwari anewe. Mwari vanoti usarembedze pachako unzwisise zvinounza nyonganiso, asi chivimba neni.
Johane 8:44 "Iwe uri wababa vako Dhiabhori, uye unoda kuita zvinodiwa nababa vako." Iye akange ari mhondi kubva pakutanga uye haana kumira muchokwadi, nekuti maari hamuna chokwadi. Kana achireva nhema, unotaura zvake, nekuti iye murevi wenhema nababa venhema.
Zvirevo 3: 5 Vimba naJehovha nemoyo wako wese, urege kusendama panjere dzako. Tinogona chete kukurira kuvhiringidzika kana tikatendera Mweya Mutsvene kuti utore hupenyu hwedu, uye kuti izvozvo zviitike tinoda;
• Gamuchira Jesu muhupenyu hwedu
• Rega chiitiko chose chinounza kusanzwisisika senge, kunwa, ufeve kana upombwe, kuputa, isu tinoita zvimwe zvezvinhu izvi kutanga kuwana iko kugutsikana uye pakupedzisira kunotungamira kupindwa muropa.
• Kwekudya zuva nezuva kana kudzidza iyo izwi raMwari pamwe chete nemweya unoera
• Rega mweya waMwari utarise hupenyu hwako, iye ndiye ega anogona kukubatsira kukurira kuvhiringidzika, ngavaite nhungamiro yako mune zvese zvaunoita.
Dzimwe nguva kunyangwe sewakazvarwa patsva Mukristu satani anozomboedza kuita kuti iwe ufunge kuti Mwari havakwanisi kukubatsira iwe mumamiriro ezvinhu. "Izvi zvakawoma kuna Mwari." "Hazvigoneke kwaari." Satan anogona kureva nhema zvese zvaari kuda Mwari akatendeka.
Jeremiah 32: 27 Ini, iyeni, ndiri Jehovha, Mwari wavanhu vese. Kune chimwe chinhu chinondikurira? "
Isaiah 49: 14-16 Asi Ziyoni rakati, "Jehovha andisiya, Ishe andikanganwa." “Mai vangakanganwa mwana pachipfuva chavo uye vasinganzwiri tsitsi mwana wavakabereka? Kunyange akakanganwa, ini handingakukanganwi Tarira, ndakakunyora pamaoko angu; madziro ako ari pamberi pangu nguva dzese.
Chinhu chimwe chatinofanira kuziva ndechekuti kunyangwe Mwari akakupa vimbiso yekuti uchagadzirira nzira, dhiabhori achaunza nyonganiso. Anozotanga kukuita iwe kufunga kuti Mwari haana kuti Acha kukupa. Iye haasi kuzokugadzirira nzira. Iwe uchazoti Mwari, asi ndanga ndichifunga kuti iwe uchandiriritira, ndakaitei? Satani anoda kuti ufunge, asi unofanira kuvimba muna She.
1.Ishe ishe ndinokutenda nekuda kwechibayiro chako, nerudo rwako pamwe nemweya wako mutsvene.
2.Wadiwa Tenzi, kanganwirai chiitiko changu chekupandukira nekusateerera kweshoko renyu Ishe shandisai ropa renyu kuchenesa zvimiro zvese zvekunzwa zvisirizvo nemanzwiro angu muhupenyu hwangu munaJesu zita
3.Mudiwa Ishe, ndinoshuva kuve vakajeka mune imwe nguva apo hunyengeri nekunyengera zvinofema mupfungwa dzangu kubva munzvimbo zhinji, uye nekudaro ndinonamata kuti mundipe nemweya unoera kuti ndirege kudzingirirwa mhepo zhinji dzenhamo nematambudziko epasi zvinogona kukonzera nyonganiso, uye kukanganisa chokwadi chezwi rako muhupenyu hwangu muna Jesu Kristu Muzita.
4. Baba handidi kuti utsvairwe munzira yekufunga kwenyika uye munamate kuti Mundipezve kujekerwa nekuenderera mberi kwekujekesa kwepfungwa munzvimbo dzese dzehupenyu hwangu muna Jesu Kristu
5. Ishe ndinonamata imi vhurai maziso ekunzwisisa kwangu kuti mundipe huchenjeri chaihwo. Ndibatsirei kuti ndirege kuwira pakunamata asi kuti ndigare ndakangwarira uye ndakarinda, ndichiziva kuti mazuva akaipa. Ndinokutendai Ishe kuti ndiri mwana wenyu akatengwa neropa uye kuti hapana chingandiparadzanise nerudo Rwenyu - uye ndipeiwo nyasha ndinonamata kuti ndimire ndakasimba kusvikira pazuva raKristu Jesu, mune Iye wandinonamata muzita. Ameni
6. Baba, runyararo rwako ngaruyerere muhupenyu hwangu serwizi rwuri muzita raJesu Kristu
7. Baba, neropa renyu mundisuke pazvinhu zvese zvakavanzika mupfungwa dzangu nemuzita raJesu Kristu
8.Mweya Unotapira, ini ndinogashira rugare rwako muhupenyu hwangu muzita raJesu Kristu.
9. Ini ndinoramba mweya wekuvhiringidzika muzita raJesu Kristu
10. Handizomboshaya mazano mune chero nzvimbo dzehupenyu hwangu muzita raJesu Kristu.
11. Simba rega rerima rinotambudza pfungwa dzangu ngadzingwe kunze zvino muzita raJesu Kristu
12. Ndinozvifukidza neropa rinokosha raJesu Kristu
13. Ini ndinotema kuti hapana chombo chakagadzirirwa kundirwisa chingabudirira muzita raJesu Kristu.
14. Ini ndinotema kuti ini ndine huchenjeri hwaMwari hushande muhupenyu hwangu muzita raJesu Kristu
15. Ini ndinoparidza nhasi kuti ndine pfungwa dzakanaka muzita raJesu Kristu
16. Runyararo rwaMwari runopfuura kunzwisisa kwese rwunogara mumoyo mangu muzita raJesu Kristu.
17. Ini ndinozviparadzanisa kubva kusangano rega kunokonzera nyonganiso muhupenyu hwangu muzita raJesu Kristu
18. Ndinozvinatsa pazvivi zvese zvinokonzera nyonganiso muhupenyu hwangu nemuzita raJesu Kristu
19. Baba ndinokutendai nekutora kubvisa nyonganiso mupfungwa dzangu muzita raJesu Kristu.
20. Ndatenda, Jesu Kristu. Ameni
Previous nyayaKunamata Kuchenesa Minamato
inoteveraMinamato Yekuti Uve Chikwereti Chemahara
Kunzwisisa Simba reVapositora Creed